Siyaasi ugu wacay soomaalida buro kaankaro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Janerik Henriksson/TT
La daabacay tisdag 8 augusti 2017 kl 10.04
Siyaasi xubin ka ah xisbiga Miljöpartiet ee degmada Järfälla ayaa iska calisay xilkii uu ka hayey degmadas kadib markii uu facebook-grupp ku qoray soomaalida in ay tahay ”buro kaankaro”.
Weli ma kala cadda ninkaan in uu ka sii mid ahaan doona xisbiga MP iyo in laga saari doono midna.
Mikael Jämtsved oo ah xildhibaan Miljöpartiet u fadhiya Järfälla ayaa sheegay in aan la aqbali karin ninkaan waxuu qoray aysana aheyn wax xisbiga Miljöpartiet aaminsan yahay, sida ay werisay P4 Stockholm.
Soomaalida laga raali-geliyo
Ilyas Hassan oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku firfircoon arrimaha bulshada ayaa soo-dhaweeyey ninkaas uu iska caliso xilalkii uu hayey balse waxuu ka dalbaday hoggaanka xisbiga Miljöpartiet in ninkaan laga xayuubiyo xubinnimada xisbiga sidoo kalena xisbiga ka raali-geliyo arintan soomaalida.
- Kuma filna is casilaadiisa, waa in xubinnimada xisbiga laga saaro, soomaalidana laga raali-geliyo, sidoo kalena waa iska la fiiriyo in ay ku jiraan dad kale oo sida ninkaan oo kale ah, ayuu yeri Ilyas Hassan.